महिलाका लागि मात्रै बस : गाडी अलग्गै गर्दैमा महिला दुव्र्यवहार हुदैनत ? ~ Khabardari.com
महिलाका लागि मात्रै बस : गाडी अलग्गै गर्दैमा महिला दुव्र्यवहार हुदैनत ?
बागमती यातायात ब्यवसायी संघले आइतबार कलंकी र बालकोटबाट आफ्ना दुई दुईवटा बस महिलाका लागि मात्रै सञ्चालन गरेपछि महिलाहरु खुसी भएका हुन्।
'मात्र मैत्री महिला यातायात सेवा' नाम दिइएको उक्त बस सेवाको उद्घाटन आइतबार बिहान यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले गरे । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले महिलाले माग गर्दै आएको सुविधाको दिन सकिएकोमा खुसी हुँदै सफलताको कामना गरे।
सरकारले महिलाको लागि आरक्षण सिटको ब्यवस्था गरेपनि नियम मिच्नलाई बहादुरी ठान्ने नेपालीमाझ प्रभावकारी नदेखिएकोले यस सेवालाई नमुनाको रूपमा ब्यवस्थितरुपमा सञ्लन गर्नुपर्छ', उनले भने।
केहिले राम्रो भने केहिले नराम्रो भने
- के महिला अब पुरुष चढेको गाडीमा चढदैन्न त ? राम्रो भन्ने पक्षहरूले आफ्नो श्रीमती श्रीमान छोरा छोरीलाई अलगअलग बसमा चढाएर यात्र गराउछ्न त ? के राजधानीमा मात्रै महिलाले बसमा यात्रा गर्छ्न ।
सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको बसको A र B साइड महिला र पुरुष को लागि छुट्याइएमा
-लौ अब भने श्रीमान र श्रीमती एकैपटक यात्रा गर्न नपाइने भइएछ?
-देश नै अशान्ति ,असुरक्षित रहेको बेला पुरुषत्वको दुव्र्यवहार बाट टाढा रहन सक्ला तर ज्यानमार जस्ता देशलाई नै आतंक मच्चाउनेहरु जुन सम्पुर्ण महिलाहरु एउटै अपहरणमा पर्ने डर रहन्छ ।
-gf हुनेहरूको चाहि हरिबिजोग हुने भो।
-गाडी अलग्गै गर्दैमा महिला दुव्र्यवहार हुदैनत ?
खबरदारी : यो बागमती बससंघ ब्यसाइयिक संघ हो ब्यापार र प्रतिस्प्रधाको बजारमा नया तरिका ल्यायो महिला बसमा ट्यापे, भाडा नतिर्ने , लाप्पा खेल्ने हुन्न । महिला दुर्ब्यबहार नारोकियेपनी केहि हद सम्म सकराक भूमिका खेल्न मद्दत गर्दछ
सामाजिक , राजनितिक अस्थिरता रहुञ्जेल सुरक्च्या फितलो रहेको बेला गुण्डाराज चल्ने ट्यापे मुन्द्रे हरुको दुर्ब्यबहारबाट छोरीचेली जोगाउने एक अल्पकालीन उपाय हो दोर्घकालका लागि सामाजिक चेतना र सिक्च्या उत्तम होला ।